हिजो मात्र बिहे गरेको फोटो राखेका यी जोडीले एक साथ गरे झु’न्डि’एर आ’त्म ह’त्या ! – Dainiki Online
May 1, 2021 May 1, 2021 adminLeaveaComment on हिजो मात्र बिहे गरेको फोटो राखेका यी जोडीले एक साथ गरे झु’न्डि’एर आ’त्म ह’त्या !
बैशाख १३,२०७८ काठमाडौ । तेह्रथुम घर भई हाल पोखरा मा रहनु भएका एक जोडीले आ’त्मह’त्या गरका छन् । हिजो मात्र बिहेको गरेको स्टाटस फेसबुक मा राखेका यी जोडीले आ’त्मह’त्या गरेका हुन् । मृ’त्यू हुनेमा श्रीमान् किरन भट्टराई र श्रीमती दीपा खनाल रहेका छन् । घट्ना को वि’स्तृत विवरण आउन भने बाँकी रहेको छ । हिजो मात्र बिहे गरेका उनीहरूले आज आ’त्म ह’त्या को निर्णय लिएपछि सबै निशब्द बनेका छन्। **यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
उनि संगै चलचित्र निर्देशक तथा बरिष्ठ लोक गायक नारायण रायमाझीले पनि एउटा लामो स्टाटस पोस्ट गर्दै प्रसान्तलाइ धैर्य धारण गर्ने क्षेमता मिलोस भन्ने कामना गरेका छन। नारायण रायमाझीको फेसबुक पोस्टमा यस्तो लेखिएको छ।